GingerMaster: Trojan Android mampidi-doza indrindra, raha ny fikarohana | Androidsis
Fabio | | Fampiharana Android, fiarovana
Ekipa mpikaroka iray avy ao amin'ny University of North Carolina State any Etazonia no namoaka izay angamba ny malware Android mampidi-doza indrindra hita hatramin'izay. Trojan iray izay manararaotra ny hack GingerBreak, azo ampiharina amin'ny Android 2.3 Ginbgerbread.
GingerMaster, anarana nomena an'io Trojan io, dia mampiditra ny ankamaroan'ny fiasa ao amin'ny fianakavian'i Trojan Android mitombo amin'izao fotoana izao amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo any Shina, saingy misy fisehoan-javatra vaovao mahaliana sy mampidi-doza. Ny malware dia nodinihan'ny mpikaroka ao amin'ny North Carolina State University miaraka amin'ny fanohanan'ny orinasan-tserasera sinoa NetQin.
Tafiditra ao anaty fampiharana toa ara-dalàna natao hampisehoana sarina vehivavy, GingerMaster dia maka ny ambony indrindra amin'ny angon-drakitry ny mpampiasa manokana, ao anatin'izany ny nomeraon-telefaona sy ny IMEI, ary mandefa azy ireo any amin'ny mpizara lavitra.
Avy eo ny server dia manomboka mampidina malware, izay manararaotra ny hack GingerBreak ary, rehefa tafapetraka, dia mifehy tanteraka ny smartphone Android.
Google dia nametaka ny fahalemena raha vantany vao hita tamin'ny volana aprily, saingy tsy azo inoana fa nahazo ny fanavaozana ny mpampiasa rehetra. Tsy sahy manome vahaolana ny mpandraharaha raha tsy tena ilaina izany, raha jerena ny habetsaky ny serivisy fanampiana ara-teknika takian'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » GingerMaster: Trojan Android mampidi-doza indrindra, raha ny fikarohana natao
Eo amin'ny tsena dia misy safidy "manao tatitra" ary izany dia ny manamarika azy ho tsy mety ... mbola tsy nampiasaiko mihitsy
tononkalo dia hoy izy:
Soa fa nahazo ny patch aho ara-potoana, tena tiako ny finday Android 🙂 Manana fiarovana antivirus amin'ny findaiko aho ary manantena aho fa handeha foana io 🙂
Warheart dia hoy izy:
Heveriko fa tsy azo ekena ny fakana an-keriny an'ireo mpampiasa Android alain'ny mpandraharaha na mpanamboatra azy ireo rehefa mahazo vaovao farany, indrindra rehefa hanidy lavaka fandriam-pahalemana ireo. Tokony ho an'ny rafitra iray mitovy amin'ny an'i Apple izy io, farafaharatsiny tsy miraharaha ireo mpandraharaha.
Valiny tamin'i Warheart
Raha tsy mpanohana na naman'ny mpandraharaha aho, raha ny momba izay lazain'i Warheart dia tsy ekeko. Ny mpampiasa dia mividy telefaona mitentina 500 euro amin'ny vidiny 50 euro, ary ambonin'izany rehetra izany dia mila fanavaozana eo noho eo sy fanohanana ara-teknika izy raha sanatria tsy mandeha tsara ilay fanavaozana (nitranga ohatra tamin'ny Vodafone's Desire HD). Noho izany antony izany dia tsy te hanavao ny mpandraharaha.
Raha mividy finday maimaim-poana ny mpampiasa dia lafo kokoa ny vidiny nefa ny vaovao farany tonga aloha (raha vao tonga izy ireo, saingy olana hafa izany). Raha tsy misy zavatra azo omena ny OS Android mihitsy, mino aho fa tokony hamerina hijery ny politikany amin'ireo mpanamboatra sy mpandraharaha i Google.
Ireo mpanamboatra dia tsy tokony afaka milaza fa misy telefaona mitondra Android ary hamoaka azy amin'ny 2011 miaraka amin'ny kinova efa lany andro.
Lahatsoratra hanoratana teny tsy misy dikany: Raha te hilaza izy ireo fa Android dia manana farafahakeliny farafahakeliny:
- Tsy misy fanamboarana (olon-dratsy lehibe amin'ny fanemorana ny fanavaozana)
- Fanoloran-tena farafaharatsiny amin'ny fahatarana amin'ny fanavaozana (vantany vao mivoaka ny kinova, farafaharatsiny x fotoana)
- Tsy misy mpandraharaha fa fitaovana maimaim-poana.
Amin'izany no ahazoanao 2 maniry HD samihafa, ny iray amin'ny Android ary ny iray miaraka amin'ny OS mifototra amin'ny Android. Ilay mpampiasa no manapa-kevitra, ary amin'ny farany, izany no fahafahan'ny SW tadiavin'i Google, sa tsy izany?
Jorge, tsy manaiky aho. Mividy finday izay "vidiny" € 500 amin'ny 50 € ny mpampiasa satria manaiky ny handany farafahakeliny € X isam-bolana farafahakeliny 18 volana izy. Raha miala amin'ny orinasa ianao alohan'ny faran'ity vanim-potoana ity dia mila mandoa sazy ianao, izay tsy mora na mampitaha mihitsy (andramo ny manontany hoe ohatrinona no mendrika avela iray andro alohan'ny hifaranan'ny fijanonanao).
Fantatro fa mety ilaina ny fandraisan'anjaran'ilay mpanamboatra terminal, ho an'ny fanaingoana (izay toheriko, saingy olana hafa) ary indrindra ho an'ny fampifanarahana ireo fitaovana. Saingy tsy tokony hanan-kery amin'ireo fanavaozam-baovao ireo ny mpandraharaha, amin'ny fomba mitovy rehefa mamoaka kinova iOS vaovao i Apple dia tsy misy na inona na inona mikasika ny fanavaozan'ny mpampiasa ny mpandraharaha, na inona na inona no fanampiana na tsia ny terminal.
Azonao atao izao ny mamaha ny Sense HTC